Ara na Ahia | Martech Zone
Pat nwere ọkwa ọzọ dị na blọọgụ ya banyere ihe na-eme na Australia ebe ndị na-akwado egwuregwu na-ahụ mbelata nke ịmatakwu akara - n'agbanyeghị na ha na-aga n'ihu na-eme otu ihe ahụ. Gịnị bụ nkọwa nke ara?
Ara na-eme otu ihe ma na-atụ anya nsonaazụ dị iche.
Marketingzụ ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi
N’ebe ọ bụla anyị hụrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa, anyị ahụghị nke a? Ndị mmadụ na-enwekarị mmasị n'ọrụ ha, na-eleghara data ahụ anya, ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ime mpaghara nkasi obi ha:
Ndị ụlọ ọrụ dị mma na Flash na-ewulite saịtị mara mma, nke mmekọrịta na-emeri akara mana enweghị onye nwere ike ịchọta ha n'ihi na ha eleghara anya SEO.
Ndị na-ere ahịa ahịa na-eleghara ịdị mfe nke ịchebe ọdịnaya gị na Internetntanetị wee jụọ onwe gị ihe kpatara ọdịnaya ha anaghị arapara.
Ndị na-ahụ maka vidiyo na-ewu saịtị buru ibu na-enweghị nkwado ederede ederede maka ndị na-agụ akwụkwọ nkịtị.
Ndị na-ere ahịa n'ahịa na-aga n'ihu itinye ntanye na ọdịnaya ọ bụla nke ọdịnaya ha na weebụsaịtị ha, na-eleghara atụmanya ha anya ' chọrọ maka kọntaktị onwe onye, ​​nghọta na ime ihe n'eziokwu.
Ndị ahịa na-agbasa mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị n'ihi na ọ dị ka ọ dị ọnụ ala. Ọ bụrụ na ngwaahịa gị bụ ngwaọrụ geriatric, ibe akwụkwọ edo edo ma ọ bụ mgbasa ozi akọwapụtara na akwụkwọ akụkọ ezubere iche nwere ike ịlaghachi na azụmaahịa ahịa.
Ọkara kachasị mma nwere ike ịbụ Ọkara a na-atụghị anya ya
Ndị ahịa ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akawanye mma na ndị na-ajụ ase, mana ọ dị obere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ahịa anaghị eleghara ma ọ bụ wepụ ndị na-ajụ ase nwere ike inye aka. Telivishọn, redio, akwụkwọ akụkọ, ozi ziri ezi, telemarketing, ibe akwụkwọ edo edo, ọkwa ọkwa, nkwado, ọrụ ebere, asọmpi, agụmakwụkwọ, ndị otu, ịde blọgụ, vidiyo n'ịntanetị, mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ, ịre ahịa email, netwọkụ mmekọrịta, njikarịcha njin ọchụchọ - niile ndị a bụ ndị na-ajụ ase na do rute ndị mmadụ. Agbanyeghị, enwere ihe kpatara nke ọ bụla n'ime ndị a nwere ike inyere ma ọ bụ ikekwe igbochi mbọ ị na-agba n'ahịa.
Ndị ahịa na azụmaahịa na-achọ gị
Igodo nke ịhọrọ ngwakọta ahịa gị na-anwale ndị na-ajụ ase, na-atụle nsonaazụ ndị ọzọ (yiri) nsonaazụ, ịgụ akwụkwọ ọcha, ịgbaso omume kachasị mma, na ịchọta ngwakọta kachasị dị irè iji nweta nloghachi kwesịrị ekwesị na ego. Ndị na-ere ahịa na-eme mkpesa na oge ndị na-azụ ahịa na-agbada mana m ekwenyeghi. Ndị ahịa na-achọ ịchọta ị mgbe inwere ezigbo ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ, ọ bụrụ n'ahịa ndị ahịa, ma ọ bụ azụmaahịa na azụmahịa. Ọ bụ ọrụ gị itinye ezigbo ihe ọmụma n’ihu ha n’oge na ebe kwesịrị ekwesị.
Mgbanwe Ngwakọta Ahịa na Oge
E nwere ụzọ nke atọ maka ịre ahịa na oge ahụ! Anyị na-elekarị ahịa anya dị ka eserese achịcha, na-agbakọ mpempe akwụkwọ ọ bụla na pasent ole ahịa ahịa ga-adaba. Mana ahia anaghị arụ ọrụ otu a. Mgbe izizi malitere netwọkụ mmekọrịta, ngwungwu mgbasa ozi gị nwere ike ịbụ mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ-kwa ọpị ma eleghị anya na-akwado asọmpi iji wuo ọgụgụ isi. Agbanyeghị, ozugbo inwere ndị otu zuru oke iji kwado uto, enwere ike iji akụ gị meziwanye ya na njikarịcha njikarịcha ebe ọ bụ na nke ahụ ga - eme ka ndị ọrụ gị nwee ọdịnaya iji wulite uto ọzọ.
Kwụsị ara na-asọ onwe gị na-aga megide gị mma ikpe! 'Ve nweta ngwa agha dị n’aka gị, enweghị ọlaọcha ọlaọcha.
Tags: Auditing ikaụmụaka ọrụ ebube network logologo chromelogo ehowọdịiche logoakara google chromeisiokwu n'usorologoogologokeytail isiokwu
Nov 19, 2007 na 1:00 PM
Amutara m na nkọwa nzuzu sitere na zig ziglar, agbanyeghị na amaghị m onye batara na mbụ. O were ogologo oge ịbanye na ya, mana ọ bụ ozi dị mkpa nke kwesịrị ịnụ.